Ngokutsho kweWorld Organisation for Animal Health (OIE), ngoMeyi 16, 2022, i-Czech National Veterinary Administration yabika kwi-OIE ukuba ukuqhambuka kwe-H5N1 yomkhuhlane weentaka ze-avian kwenzeka kakhulu kwiRiphabhliki yaseCzech.
Uqhambuko lwenzeka eStrakonice County, eSouth Bohemia, kwaye lwaqinisekiswa ngoJanuwari 5, 2022. Umthombo wokuqhambuka awaziwa okanye awuqinisekanga. Uvavanyo lwaselabhoratri lufumanise ukuba iimallards ezingama-277 ekurhaneleka ukuba zosulelekile, kwathi abayi-12 bagula, kwaye abangama-277 babulawa kwaye balahlwa.
Ngoku ukuba ubhubhane uphelile, i-Czech National Veterinary Administration ayisayi kungenisa naziphi na iingxelo.
Sizibophelele kwisityalo esinikezela ngenkunkuma yezilwanyana, kwaye sikwindawo ephambili kwinkalo yobugcisa bokurisayikilisha inkunkuma yezinto eziphilayo. Ngokuqaqambisa kwenzululwazi yendalo esingqongileyo ephucukileyo kunye netekhnoloji kwihlabathi, izixhobo zonyango ezingenabungozi ziye zaphuhliswa, kwaye iseti epheleleyo yonyango olungenabungozi lwenziwe.
Iseti epheleleyo yezixhobo zokwenziwa kwe-automation, inkqubo yonyango evalelwe ngokupheleleyo ngaphandle kongcoliseko kunye neziphumo zonyango zokhuseleko lokusingqongileyo, unyango olungenabungozi, ukurisayikilishwa, ukusetyenziswa okuphezulu kuye kwaxhalabisa. Zonke iisuti zinconywa ngabasebenzisi besuti.
-Umvelisi wezityalo onikezelayo ngobuchule